PSJTV | ध्यानले हटाउँछ तनाब
सोमबार, ०७ फागुन २०७४ पिएसजे न्युज
आदर्श प्रधान मनोबिज्ञ, होलिस्टिक माइण्डस् एण्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर अहिलेको ब्यस्त जीबनमा मानिसलाई नचाहेर पनि तनाब त अबश्य पनि आउँछ । तर, उक्त तनाबलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । तनाबलाई कम गर्ने बिभिन्न माध्यामहरु मध्ये ध्यान अत्यन्त लाभप्रद बिधि हो । जति गहिरो ध्यान गर्न सक्छौं त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ । बास्तबमा ध्यानले तनाब बिर्सजन मात्र नभई शारिरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रुपमा स्वास्थ बनाउन मद्धत गदर्छ । ध्यानको लागि केही हामीले तयारी गर्न सकिन्छ । तर, ध्यान भने ल्याउन सकिदैन । हाम्रो तयारी पछि ध्यान आफै हुने हो । जसरी निद्रा पनि हामीले चाहेर लाग्दैन । मात्र, हामीले निद्रा आउने बाताबरण तयार गर्न सक्छौं । यसरी नै हामीले प्रयास गर्दै जाँदा जब कुनै प्रयास बिहिन अबस्थामा पुगे पछि ध्यान आफै उत्रिन सहज हुन्छ । हिजो आज ध्यान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । कतिले त ध्यानको बारेमा नबुझेर नै आँखा चिम्लिन हतास गछौं । त्यसैले त गहन ध्यानको अबस्थामा जान सक्दैनौं । सामान्य रुपमा भन्ने हो भो ध्यान स्वंयम् तिर फकर्ने क्रिया हो । जसमा एकाग्रताको प्रयोग हुदैन । समग्ररुपमा होसमा बसेर साक्षी भाबमा बस्ने क्रिया नै ध्यान हो । गहिरो ध्यानको लागि केही सजिलो सुझावहरुः सुविधाजनक समय छान्नुहोस ध्यान हामीले बिश्रामको समय मात्र गर्नु राम्रो हुन्छ । हतास, तनाब, थकानको अबस्थामा ध्यान नगर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले आफ्नो अनुकूलको समय छान्नु राम्रो हुन्छ । हुनत ब्रम्ह मूहर्त बिहान ४ देखि ६ बजेको समयलाई उत्तम मानिन्छ । तर यहि समयमा समय अनुकूल नभएमा कुनै पनि फूसर्दको समयमा ध्यान गर्न सकिन्छ । शुक्ष्म ब्यायाम गर्ने ध्यान शुरु गर्नु अघि हल्का शुक्ष्म ब्यायाम गर्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ । रक्तसंचार अत्यन्त राम्रो हुनुका साथै शरिरको लचकता बढाउन मद्धत गदर्छ । जसले गर्दा लामो समय सम्म ध्यान बस्न सहज बनाउँदछ । शान्त स्थानमा बस्ने ध्यानको शुरुवातमा शान्त स्थानको छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ । जब गहन ध्यानमा सहज रुपमा जान सकिने अबस्थामा पुगे पछि कुनै पनि अबस्थामा पनि ध्यान बस्न सकिन्छ । प्राणायामको अभ्यास गर्ने ध्यानको आसनमा बसे पछि लामो एवं गहिरो श्वास लिने र छाड्ने गर्नु पर्छ । जसलाई भस्त्रिका भनिन्छ । यसको साथै समय छ भने कपालभाती, अनुलोमबिलोयम, भ्रामरी प्राणायाम पनि गर्न सकिन्छ । प्राणायामले मस्तिष्क देखि लिएर शरिर भरी अक्सिजनको संचार गर्ने हुँदा लामो समय ध्यान बस्न सहयोग पुर्याउँछ । जसले गर्दा ध्यानमा बस्दा छटपटी कम हुन्छ । आरामसँग बस्ने ध्यानको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मेरुदण्ड सिधा पारेर आरामसँग बस्नु पर्छ । आफ्नो गर्दनलाई बिश्राम पूर्वक राख्नु पर्छ । सहजरुपमा आँखा बन्द गर्नु पर्छ । सामान्यतया पलँेटी मारेर सुखासनमा बस्न सकिन्छ । कसैकसैलाई लामो समय सम्म पलेँटी कसेर बस्दा झमझम हुने, ढाँड, घुँडा दुख्ने समस्या छ भने कुर्सीमा आरामले बस्न सकिन्छ । हातलाई कुनै पनि मुद्रा जस्तै ज्ञान मुदा, ध्यान मुद्रामा राख्न सकिन्छ । दुबै हातलाई एक अर्कामा क्रस गरेर पनि राख्न सकिन्छ । पेट हल्का हुनु राम्रो ध्यान गर्दा अक्सर मानिसहरु निदाउन सम्भावना अधिक हुन्छ । त्यसैले खाना खाने बित्तिकै वा पुरा खाली पेटमा ध्यान नगर्नु राम्रो हुन्छ । पेट हल्का भएको अबस्थामा कुनै पनि बेला ध्यानमा बस्न सकिन्छ । ठिक्क भरिएको पेटको अबस्थामा ध्यान गर्दा शरिरमा ध्यान नजाने हुँदा ध्यानको लागि उत्तम मानिन्छ । मुहारमा मुस्कान प्रायः मानिसहरु ध्यानलाई गम्भिर ठानेर ध्यानको अभ्यास गर्ने गर्छन । यसले ध्यानलाई बाधा पुर्याँउछ । ध्यानले बर्तमान अबस्थामा राख्दछ । त्यसैले ध्यानलाई एउटा सामान्य खेलझैं मानेर मुस्कुराएर ध्यान गर्नु पर्छ । यसले ध्यानलाई गहन रुपमा जान मद्धत गदर्छ । यसले मानिसलाई बिश्राम अबस्थामा सहजै पुर्याउँदछ । ध्यानको अभ्यासको तयारी अब सबै तयारी भइसकेको छ । शान्तसँग बस्नु पर्छ । धेरै बिचार चलिरहेको छ भने नाकको टुप्पोमा श्वास गई रहेको र श्वास आइरहेको हेर्ने गर्नु पर्छ । यसले मनमा चलिरहेको बिचारलाई कम गरेर बर्तमान आउन मद्धत गदर्छ । कुनै कुराको बिश्लेषण गर्नु हुदैन । मनको बिचार, बाहिरको आबाज जे आइरहेको यसलाई पूर्णरुपमा स्विकारेर अछि बढ्नु पर्छ । सबैकुरालाई समग्र रुपमा जान्ने तर कुनै कुराको बिश्लेषण भने गर्नु हुदनै । नियमित अभ्यास पछि बिस्तारै बिचार कम हुँदै जान्छ । यसको लागि राम्रो ध्यान प्रशिक्षकसँग ध्यानको प्रशिक्षण लिनु राम्रो हुन्छ । ध्यान सिद्धिए पश्चात यसो गर्ने ? ध्यानको सिद्धिए पछि एकै चोटी आँखा खोल्नु हुदैन । पहिला मनमनै आँखा खोल्दैछु भन्ने भाव केही समय दोहोराए पछि करिब तिन चोटी लामो गहिरो श्वास लिने र छाड्ने गरे पछि मात्र बिस्तारै आँखा खोल्नु पर्छ । जब हामी ध्यानको गहिराईमा पुग्छौं त्यतिबेला हामी अर्कै समयमा हुन्छौं भने आँखा खोले पछि अर्कै समयमा हुन्छौं । त्यसैले हतासमा आँखा खोल्नु हुदैन । ध्यान गरे पछि आफूलाई एक प्रकारको शान्ति, स्फूर्ति, उत्साह बढेको छ भने ध्यानको सही अध्यासमा छु भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । ध्यानलाई मानिसको तनाबलाई ब्यबस्थापन गर्नुका साथै बेशर्त प्रेम, अकारण खुशी प्रदान गदर्छ ।
माधव नेपाल असन्तुष्ट, भने– दुई जनाको चोचोमोचोचाहिँ मानिन्‍न !
19th May 2020 पिएसजे न्युज
नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि २० अर्ब रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक ...
निजी तथा सरकारी अस्पतालले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज तरिकाले प्रवाह नगर्दा विभिन्न रोगले प्रताडित बिरामी थप जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ। अधिकांश अस्पतालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम भन्दै स्वास्थ्य सेवा ...
काठमाडौं : नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ८२ पुगेको छ । आज (मंगलबार) भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा भएको परिक्षणमा ७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । यो संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८२ ...